कीर्तिमानी खेलाडीलाई बधाई ! – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
कीर्तिमानी खेलाडीलाई बधाई !
२०७६ मंसिर २७, शुक्रबार १२:१२ गते
नेपालमा दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)को १३औँ संस्करण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएसँगै नेपाली खेलकुदमा इतिहास रच्ने नेपाली खेलाडीहरुलाई बधाईको ओइरो लागेको छ । नेपालकै अवधारणामा सन् १८८४ मा जन्म भएको सागमा नेपालले तेस्रोपटक आयोजक बनेर सफलतापूर्वक सम्पन्नमात्रै गरेको छैन, २० वर्षपश्चात् घरेलु मैदानमा भएको प्रतिस्पर्धामा ५१ स्वर्ण पदक जितेर कीर्तिमानीसमेत कायम गरेको छ । आठौँ सागमा हासिल गरेको ३१ स्वर्णको इतिहासलाई सुधार गर्न नसकेको नेपालले यसपटक ५० स्वर्ण जित्ने उच्च लक्ष्य राखेको थियो । नेपाली खेलकुदमा ऐतिहासिक सफलता थप्दै ५१ स्वर्ण पदक जितेर लक्ष्य पार गर्दै ६० रजत र २०६ कास्य पदक प्राप्त गर्न सफल भएको छ । राज्यको कमजोर लगानी र व्यवस्थापनको बाबजुद पनि १३औँ संस्करणमा आठौँ सागको नतिजा सुधारेर कीर्तिमानी कायम गर्न सक्नु सराहनीय मान्नुपर्छ । किनभने, नेपाली खेलकुदमा अपर्याप्त खेल सामग्री, नेतृत्वको उदासीनता र सागको अन्तिम तयारीसम्म पनि रंगशाला र खेल स्थान तयार नहुनुजस्ता दुःखदायी स्थितिको सामना गर्दै नेपाली खेलाडीले जुन सफलता हासिल गरेका छन्, यो राष्ट्रिय गौरवको विषय हो । खेलकुद तयारीका हिसाबले साग सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउनु एउटा चुनौती थियो भने नेपाली खेलाडीले सन्तोषजनक नतिजा हासिल गर्न सक्दैनन् कि भन्ने संशय पनि कायमै थियो । तर, नेपाली खेलाडीले त्यसलाई गलत साबित गर्दै ऐतिहासिक सफलता दिलाएका छन् ।
सागमा विभिन्न विधामा ५९६ खेलाडी प्रतिस्पर्धामा होमिएका थिए । भूगोल, जनसंख्या र खेलकुदमा पर्याप्त पूर्वाधार भएको भारतले नेपालको भन्दा बढी पदक जित्नु अस्वाभाविक थिएन । र, पनि नेपाली खेलाडीको उपलब्धि असामान्य रह्यो । यतिबेला प्रशिक्षणमा सहभागी सबै खेलाडी एवम् प्रशिक्षकहरु बधाईका पात्र भएका छन् । सरकारले विजयी खेलाडीलाई काठमाडौँ उपत्यकामा रथारोहणसहित सम्मान गर्दैछ । यसका साथै प्रदेश र संघीय सरकारले विजयी खेलाडीलाई पुरस्कार घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा आमन्त्रण गरेर बधाई दिँदै स्वर्ण पदक विजेतालाई जनही नौ लाख, रजत पदक विजेतालाई जनही छ लाख र कास्य पदक विजेतालाई जनही तीन लाख रूपैयाँ दिने घोषणा गरेका छन् । यसका साथै एकभन्दा बढी स्वर्ण पदक जित्ने चार खेलाडीलाई प्रतिस्वर्ण ११ लाख रूपैयाँका दरले पुरस्कृत गर्ने घोषणा गरिएको छ । यस घोषणाले खेलाडीहरु उत्साहित भएका छन् । उसो त, केही खेलाडीले चित्त पनि दुखाएका छन् । व्यक्तिगततर्फमा रजत विजेताले छ लाख पाउँदै गर्दा टिम इभेन्टमा स्वर्ण जित्नेलाई जनही पाँच लाख दिने घोषणा गर्नु न्यायसंगत नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । पुरस्कार यति र उतिभन्दा पनि सरकारसँगको अपेक्षाचाहिँ खेलाडीलाई समर्पित भएर खेल्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हो ।
नेपाली खेलाडीले सुविधा र अवसर पाए भने सफलता हासिल गर्न सक्छन् भन्ने दृष्टान्त साफले प्रमाणित गरिसकेको छ । यद्यपि, साग खेल काठमाडौँ, पोखरा र जनकपुरमा आयोजना गरिँदा व्यवस्थापनमा लापर्बाही र अनियमितता भएका गुनासा पनि उत्तिकै आइरहेका छन् । जनकपुरमा आतसबाजी गरेर अलपत्र छाडिएको पटाकाले एक बालकको मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक भएको छ भने काठमाडौँमा एक प्रहरीले अनुचित बल प्रयोग गर्दा एक जना पत्रकार सिकिस्त भई उपचार गराएका छन् । यस्तै, उपहार वितरण र टिकट बिक्रीमा पनि अनियमितता भएको आरोप लागेको छ । खेलाडीहरुले राष्ट्रको गरिमा बढाउँदै गर्दा खेल व्यवस्थापकले भने लोभ र लाभमा फसेर इज्जत फालेका छन् । सागबाट के प्रमाणित भएको छ भने खेलाडीको भविष्य र सुविधामा ध्यान दिने हो भने राष्ट्रको इज्जत र प्रतिष्ठा बढ्ने रहेछ । राज्यले पदाधिकारी र कर्मचारीका लागिभन्दा खेलाडीलाई प्राथमिकता दिन सके खेल्दाखेल्दै कुनै खेलाडी पलायन हुनुपर्दैन । अब चौधौँ साफमा कीर्तिमानी कायम गर्न आजैदेखि खेलाडीहरुलाई खेल क्षेत्रमा समर्पित भएर जीविका निर्वाह गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारले उचित कदम चाल्नु जरूरी देखिएको छ ।